Abshir Osman Saed
wanleweyn added a post in a topic: Qaabka loo maamulo maalka ama lacagaha 19 Jun 2017
wanleweyn added a post in a topic: Qaabka lacag lagu kasban karo 17 Jun 2017
Asbaabta liibaanta ama guusha waa ay kala duwantahay ma jirto qof dareema liibaanta iska furan si kasta cimrigaada ha u dheeraado .
Qof kasta waxaa soo mara waqti wanagaasan islamarkaana ka faaideystay ilaahayna ku garab galay dadaalka iyo waafajinta iyo siismadaba alaah ayaa iska leh ma ahan mid ku imaakarto aqoon iyo waaya aragnimo intaba kaliya waxaa muhiim ah in lala yimaado sabab keeni karto in uu qofka sabab layimaado.
Si kastaba ay noqota in aad gaartid guul sida in aad heshid lacag islamrkaana aad ku noolaatid nolosha qeebaheeda sare ma jirto qof nacaayo ama dhahaayo lacagtaan waa ay igu badantahay ama qof dhibsanaayo badnaashaha maalka insaanka sidiisaba waxaa afkiisa buuxsama marka uu iilka la dhigo inta ka horeyso wuxuu leeyahay wali waxaa ii dhiman in aan helo lacag fara badan waa mid insaanka ilaahay u dhaliyay.
Hadaba waxaa uu idin soo gudbinaayaa aflixi.com talooyiin oo guul loogu gari karo in aad heshid maal ama lacag.
1.ka fogow waxyabaha shakiga keeni karo sida tuugonimada,ka ganacsiga dawooyiinka dhacay,mukhaadaraadka ama darooyooyiinka ,ribada waxaas oo dhan waxay keenayaan in uu ganacsigaada uu guulaysan waayo sababtoo ah uma aadan marin dhariiqii saxda ahaa.
2.Noqo qof ku kalsoon nafsadiisa islamarkaana rajaynaayo in uu guul ka gaaro ujeedkiisa oo ah in uu lacag helo.
3.Ha guursanin oo ha niyad jabin marka ugu horeyso isku daygaada fashil kusoo wajaha sababtoo ah fashilka wuxuu hoos u dhigaayaa dareenka ah in aadan heli Karin lacag hadii uu fashil kusoo wajaha kaliya fiiri meesha aad hiigsanayso hana u niyad jabin fashilka kuugu dhacay isku day sida aad uga samata bixi laheed .
4.Xadey fikirkaada iyo wadada aad ku socotid ma tahay wadadaas mid ku gaarsiin karto hadafka mustaqbalka aad leedahay.
5.Kabaro dadka kale fikarado kuwaas oo suuqa kaaga soo horeyay kana dalbo saaxiibadaada talooyiin ku aadan sida aad ku heli laheed lacago.
6.Ku dadaal marwalbo sida qaabka aad dadka ula macaamilayso iyo in aad jeclaatid dadka islamarkaana aad ixtiraamtid si ay gacan kaaga siiyaan in uu ganacsigada hormar sameeyo.
Wadooyiinka kaa saacidi kara in aad heshid lacag
1.In aad leedahay marka hore hiwayad ama waxaa aad jeceshahay sida iibiinta baceecooyiinka barnaamijyada computer ka,in aad aqoontaada kor u qaadid.
2.Iibinta qaar ka mid ah cuntada fudud sida cabitaanada kulul iyo kuwa qabowga intaba waa mashruuc fudud hadana lacag laga heli karo.
3.In aad furatif mashruuc yar islamarkaana aad iibisid badeecooyiin kala duduwan waxaa suuragal gal ah in ay kuu yimadaan saaxiibadaada iyo in ay kugu soo xiraan macaamiil cusub.
4.Ihtimaam sii sidii aad ku dhamaysan laheed jaamacadaada ilaa aad ka heshid fursad shaqo si aad u noqotid ugu danbeystii in aad furatid mashruuc ganacsi.
5.Hadii aad leedahay hiwaaayad ah cunto Karin waa in aad hormarisaa cunto karintaada sidaasi waxaa kuu suuragalaayo in aad furatid maqaaxi maadaama hiwayadaada ay tahay waxaana hubaal ah in aad ka samayn kartid lacago fara badan.
6.Hadii aad jeceshahay technology-yada waxaa la doorbidaaya in aad hormarisid waayo ayada ayaad lacag ka samaynkartaa sababtoo ah aqoonteeda ayaad leedahay .
7.Hadii aad doorbisay ka ganacsiga dharka waxaa la doorbidaayaa in aad hormarisid ka ganacsiga dharka .
wanleweyn added a post in a topic: Sidee ku noqon karaa qof ganacsade ah(Business Man) 14 Jun 2017
wanleweyn added a post in a topic: Akhlaaqda shaqada 10 Jun 2017
Mararka qaar nolosha waxaa kusoo wajaha caqabado dhan walba leh ayadoo sidaasi ay jirto hadana waxaa loo baahanyahay ama loogu baahanyahay qofka shaqeeya in uu ilaaliyo akhlaaqdiisa dhanka shaqada caqabadaha ku haysta ma ahan in ay saameyso shaqada ama dadka aad la shaqeyso.
Tusaale hadii uu ku haysto mashaakil qoyseed waa mid adiga kuu gaar ah ma ahan in ay saameyso goobta shaqada sida imaashaha shaqada iyo ka bixitaanka waqtiga shaqada.
Qofka shaqeeya waxaa muhiim ah in uu la yimaado akhlaaq wanaagsan oo uu kula shaqeyn karo meesha uu ka shaqeeyo akhlaaqada wanaagsan waxaa ka mid ah.
Ø In uu qofka u hogaansanaado amarada kasoo baxaayo maamulkiisa
Ø In uu yahay qof la socon kara is badal walbo dhaca.
Ø In uu yahay qof lala shaqeyn karo ayna dhib ku qabin dadka la shaqeeyo
Ø In uu yahay qofka dagan oo aan fudeed badneen.
Ø In uu yahay qof xanaaqiisa yar yahay uusan ahayn qof maalaayacni isaga xanaaqo.
Ø In uu ogolyahay qofka in lagala xisaabtamo shaqadiisa.
Ø In uu iska ilaabo qofka dabeecadaha gurigiisa ku jooga.
Ø In uu ogolyahay qofka in la amri karo uusan u qaadanin ciqaab.
Qofka akhlaaqa wanaagsan ee shaqeysta waxaa caado u ah in aysan is khilaafaynin shaqaalaha dhexdooda mar hadii la shaqeynaayo waxaa shaqada ku kulmaayo dad aanan waligood is arkin balse ku kulmay shaqada qof walbana dabci gooni ayuu leeyahay waxa ay ku wada joogi karaana ay tahay daceecada shaqada.
Wadooyiin kuu sahli kara in ay wanaagsanaato akhlaaqda shaqadaada
1.Marka hore in aad allaah ka baqdid halka aad ka baqi laheed masuuliyiinta shirkadda shaqadana aad u qabatid inta awoodaada ah.
2.in ay noqdaan masuuliyiinta laftigooda kuwa loogu daydo akhlaaqda shaqada.
3.in uu qofka ku qanacsanyahay shaqada in ay cibaado tahay islamarkaana ay tahay in uu sugo oo sidii loogu tala galay uu u qabto.
4.in si isku mid ah lala xibaabtamo dadka khaladka samaynaayo
5.in si isku mid ah ugu istaagaan shaqalaaha shaqada shirkadda.
wanleweyn added a post in a topic: Side ku xamili karaa ama u adkeysan karaa gaajada soonka 5 Jun 2017
wanleweyn added a post in a topic: SHURUUDAHA SOONKA 3 Jun 2017
wanleweyn added a post in a topic: Cilaajka ama daawada Ramadaan 3 Jun 2017
wanleweyn added a post in a topic: Maxay muhiim u noqotay wax akhrinta 25 May 2017
wanleweyn added a post in a topic: Lacag (Money) 23 May 2017
Lacagta waa mida ay kulmiso dhamaan ashyaada ha ahaato mid fardi ama kali iyo mid wadareed,lacagta waxay kulmisaa sida real state yada ,baabuuurta,ganacsiga iyo alaabta iyo wixii soo raaca oo lacag ah.
Lacagta ama maalka waxaa lagu sheegaa ama lagu qeexaa dahabka ,madanta,iyo wixii shabaha waraaqadaha lacagta.
Qeebaha lacagta ama maalka
Lacagta ama maalka waxaa loo qeybiyaa qeybo badan
1.lacag sugan wa: waa nooca koowaad ee maalka ama lacagta waxaana loo qebiyaa laba qeybooda waxayna kala yihiin
· Lacag sugan:waa lacagta aan la qabalaynin in la wareejiyo ama loo raro meel kale ilaa xaalad keenta mooyaanee in ay lacagtaas is badal ku dhacay asal ahaanteeda.
· Lacagta wareegta:waa lacagta la ogolyahay in ay wareeg sameyso aydoo markaas aysan aheen mid duug ah oo aan baaba ahayn islamarkaana aysan ku dhicin wax is badal ah ayadoo meesheeda taalo,sida luulka ,dahabka iyo macdanta.
Lacagta sida ay u shaqeyso
Adeegsiga lacagta waa mida ugu weyn ganacsiga ganacisgaas ha ahaado mid shakhsiyadeed ma mid lawada leeyahay oo shukaaro lagu yahay.
Lacagta waa mida isku xirta ganacsadaha iyo macaamiilka hadii aysan jirin lacag suura gal ma ahan in uu sii socda ganacsigaada.
Lacagta qaabka ay u shaqeyso waxaa ugu waaweyn 2 qeybood
· Lacag is weydaarsi ama lacag is dhaafsasho
Waa habka ama hanaanka ay isku dhaafsadaan ganacsata marka ay wax soo iibsadaanaayan ama marka ay samaynayaa isdhaafsi ganacsi iyo adeega waxsoosaarka tusaale waxaa dhacdo markaas in ay ganacsatada ay is dhaafsadaan lacag.
· Qeybta xisaabaadka
Waa adeegsiga qiyaasta lagu cabiro badeecada iyo adeegyada markaas ay shirkadda bixiso ,xisaabta waa aasaaska ganacsiga hadii aysan jirin xisaab sax ah lagu xakameeyo shirkadda waxaa hubaal ah in shirkadda durba ay suuqa ka bixi doonta waayo ma laha xisaab ah maxaa soo galay shirkadda oo faaida ah ama khasaaro ah.
Waxaa cad in lacagta muhiim u tahay qofka bani aadamka noloshiisa si uu ugu guto baahiyahiisa kala duwan iyo in uu ku gaaro lacagtaas magic iyo maamuus lacagta la,aanteeda waxba ma socon karaan lacagta raadis bay rabtaa waana sababta loo samaynaayo ganacsi ama loo shaqeysanaayo inta hal ujeedo ayay wada leeyihiin kan loo shaqeeyo midka shaqaalaha ah inta waa uun lacag raadis
wanleweyn added a post in a topic: Qaabka loo ilaaliyo xuquuqda caruurta 22 May 2017
Caruurta waa mustaqbalka bari mustaqbalka barina waa caruurta waxaad moodaa ereygaas dhihistiisa ama ku dhawaaqistiisa in ay aad u wanaagsantahay hadana loo samaynin caruurta caruurta waxay mustaqbalka bari noqon karaa marka uu waalidkooda kasoo baxa ama u sameeya waxyaabaha u baahan caruurta xiliga ay yar yaryihiin.
Caruurta marka ay yaryaryihiin waxyaabaha ay u baahanyihiin waxaa ka mid ah in helaan tarbiyo suuban islamrkaana lagu dadaalo sidii ay waxbarashooda sare loogu qaadi lahaa maskaxdooda iyo aqoontooda la kobciyo laguna hago wadada qurxoon ee dariiqa saxda ah.
Wadama soo koraayo waxaa inta badan ka dhaca rabshado iyo iska horimaadyo dagaal kaasi uu sabab badan ku yeelanaayo in caruur fara badan aysan helin nabad gelyo iyo meel amaan ah ay wax ku bartaan wadamada qaar caruurta waxaa loo adeeg sadaa dagaalada markaas wadanka uu ka socda sidaasina ku dhacdo in ay caruurta waayaan xuquuqda ay lahaayeen.
Caruurta marka ay yaryihiin waxay u baahanyihiin in laga farxiyo oo lo ka xeeyo mararka qaar meelaha loo darxiis tago si ay ugu soo nastaan islamarkaana farxada lala qeybsado .
Caruurta marka ay yaryihiin waa marka ay u baahanyihiin in aad loogu dhimriyo waalidkana markaas ula hadlin caruurta sida qof weyn oo kale caruurta hadalo ay xamili karaan lagula hadlo uusan dhaawac u gaysanin warkaada .
Caruurta marka ay yaryihiin waa marka aad loogu faaideysto tarbiyadooda hagaagsan markaaas waa in aad u muujisaa jeceel iyo naxariis hadii uu markaas waalidka tusin naxariis caruurtaas lagama yaabo in ay noqdaan caruur wanaagsan oo baariyaal islamarkaana ay wax u taraan waalidkooda waayo markii ay yaraayeen ma aysan arkin wax naxariis.
Caruurta xaqa ay ku leeyihiin waalidkooda ma ahan mid sahlan caruurta ay baari noqdaan waxay ku xirantahay marka hore in aad hagaajisid tarbiyadooda iyo in aad u muujisid marka ay yaryihiin naxariis iyo kal gaceel sidasi ayaa ku imaan karto in ay caruurta noqdaan kuwa muqtabal leh .
wanleweyn added a post in a topic: Sidee ku noqon karaa ganacsade guuleysta 21 May 2017
wanleweyn added a post in a topic: Sidee ku noqon kartaa in aad lacag yeelatid adigoo yar 21 May 2017
Dadka intaba badan waxay jecelyihiin in ay lacag yeeshaan ayagoo da,ahaan yar laakiin taasi waxay u baahantahay dadaaal,xirfad badan,nasiib iyo samir fara badan.
Waxwalbo waa la gaari karaa waa hadii aad u yeelatid samir iyo dulqaad saxda ah islamarkaana go,aankaada aad ku adkaysatid aadna la timaadid sababaha aad ku noqon laheed in aad noqotid qof lacag leh waliba adigoo da,ahaan ah qof yar.
Wax bixinta maalka alaah unbaa bixiya anaga waxaa nagala doonaayaa kaliya in aan la nimaadno sababaha iyo xirfadaha aan ku hanan laheyn hantida.
1.marka hore adiga nafsad ahaantaada diyaar noqo ama hami u haay ujeedkaada inta aadan ka fikirin lacagta aad suuqa ku geli doontid oo aad badeecada ku keeni doontid.
2.sameey miizaaniyada kooban sidoo kale xadid miizaaniyadaada mushaarkaada.
3.yarey lacagaha aad micno darada u isticmaalayso.
4.yarey nafaqada guriga aad ku bixin jirtay ku xirnow noloshaada hore ee caadiga aheed.
Hoos u dhig ama yarey biilka nolosha
1.yarey isticmaalka xad dhaafka ah ee cuntada laga isticmaalo xaafada.
2.qorsha u sameey biilka guriga.
3.yarey isticmaalka korontada iyo biyaha.
· Maal gashi ku sameey suuqa laakiin ka hor la tasho dadka khubarada ah.
· Waa lagama maarmaan mashruuc dhax gal ah in la timaadid.
· Maal gashi ku sameey in aad guri dhistidsi aad faaiido uga sii raadisid.
wanleweyn added a post in a topic: 7Qaababka loola dagaalamo tuugsiga 20 May 2017
Tuugsi ama gacmo hoorsi
Tuugsiga waa dalab laga dalbanaayo dadka wax haysata sida lacag,raashiin iyo wixii la mid ah ee uu qofka laga heli karo islamarkaana awooda.
Tuugsiga sidiisaba ma wanaagsana ayadoo laga fiirinaayo dhanka diinteena islaamka ilaa qofka xalka kale uu waayo uu naftiisa ku badbaadiyo.
Sababaha iyo wadooyiinka tuugsiga
Caalamka wuxuu ku faafay tuugsiga muuqda kaasoo aan ahayn mid ku dheexan ilbaxnimo wuxuu leeyahay tuugsiga raad xun .
7Qaababka loola dagaalamo tuugsiga
1.Zakada lagu waajibiyay dadka ilaahay dhaqaalaha siiyay in ay bixiyaan zakadana waa mid ilaahay waajibiyay hadii la siiyo dadka aan wax haysanin waxaa yaraanaayo faqriga iyo tuugsiga.
2.in lasoo diiwaangeliyo qoysaska aan tabarta daran oo aan waxba haysanin si ay u sahlanaato yareynta tuugsiga ama faqriga.
3.in la deemiyo qoysaska wanaagsan ee duruufta u gaysay tuugsiga lacago ay ku smaystaan maalgashi yar yar si ay noloshooda ugu maareeyaan.
4.in la siiyo dadka tuugsanaayo fursado shaqo ah sida dowlada iyo shirkadaha.
5.in laga wacyi geliyo bulashada tuugsiga in uusan u wanaagsaneen sumcadiisa.
6.in la xoojiyo la dagaalanka tuugsiga.
7.Jaamacadaha in ay siiyaan waxbarasho lacag la,aan ah qoysaska aan awoodin waxbarshada ubadkooda
wanleweyn added a post in a topic: Unemployment ( shaqo la,aan) 20 May 2017
wanleweyn added a post in a topic: Sidee ku noqdaa qof caan ka ah iskuulka 16 May 2017